क्र्यास ... कुनै foo-foo कृपया। | Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 10, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 10, 2006 Douglas Karr
हिजो पहिलो दिन थियो जुन म घर आएँ र जुon आउट गरें। आज म क्र्यास भयो। धेरै जस्तै, म बानी को एक जीव हुँ। चाखलाग्दो कुरा, मेरो बानी साप्ताहिक हो, यद्यपि। मेरो साताको अन्त्य प्रायः कार्य-प्याक हुन्छ त्यसैले हप्तामा जे पनि बानी मैले पहिले गरिसकेकी हुँ, यो सामान्यतया शनिबार साँझ समाप्त हुन्छ। यदि म सोमबार काम गर्न ढिला भयो भने, म प्राय: हप्तामा ढिला हुँ। यदि म सोमबार ढिलो काम गर्छु भने ... म हप्तामा ढिलो काम गर्दछु।
यो अन्तिम सप्ताहन्तमा मैले पूरै सप्ताहन्तमा काम गरें। हामी काममा रिलीजको लागि जाँदैछौं, र म एकै समयमा side साइड प्रोजेक्टहरू भन्दा कम जग गर्दै थिएँ। सन्तुलन कार्य रमाईलो छ, तर म अधिक र अधिक लिन लिन्छु ... र म केवल अधिक मेहनत र कडा मेहनत गर्दछु। हिजो राती यो मेरो साथ समातियो र मैले चुप लगाएँ। आज राती, म क्र्यास भयो। म बाहिर pooped छु। र मैले मेरो 'बानीको हप्ता' एक नराम्रो सुरुवातबाट सुरु गरें। अब म तुरुन्त थकित हुनेछु जब म कामबाट घर फर्कन्छु र सायद म हरेक रात निदाइरहेको भेट्दछु जब म घर पाउँछु। अर्ग।
उज्ज्वल पक्षमा, यसको मतलब यो हो कि म मांगमा छु, जहिले पनि राम्रो चीज! नकारात्मक पक्षमा, म मेरो काममा बसोबास गर्न मन पराउँदिन। म सिद्धता बनाम वितरण गर्ने एक उत्कृष्ट समझ छ। मलाई सिद्ध मन पर्छ। म घृणा गर्छु बस डेलिभिंग गर्दै ... यद्यपि मेरो ग्राहकहरु लाई कहिले भिन्नता थाहा छैन। डिलिभरीको अर्थ भनेको महिनौं पछि मैले आफैलाई 'redoing' फेला पारे जुन मलाई थाहा थियो कि मसँग अतिरिक्त समय भएमा डेलिभरीमा सही गर्न सक्थें।
मार्केटिंग र सफ्टवेयर प्राय: यस्तो हुन्छ, यद्यपि तपाईलाई लाग्दैन? डेडलाइनहरूले कार्यान्वयनको माग गर्दछ र प्राय: पूर्णता बाहिर। क्यालेन्डर प्राय परिणामहरू भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डेलिभर गर्ने आवश्यकता उत्तम रूपमा वितरण गर्नु भन्दा बलियो छ। अक्सर, म याद गर्दछु कि ग्राहकहरूले सुविधाहरू, कार्यक्षमता, र सौंदर्यशास्त्रको लागि उनीहरूको हातमा केहि चाँडो पाउनु भन्दा चाँडो भन्दा धेरै त्याग गर्थे। के यो अमेरिकी त्रुटि हो? हतार, हतार, हतार… दुर्घटना? वा यो विश्वव्यापी त्रुटि हो?
म 'क्रेप' को वकालत गरिरहेको छैन। क्रेप तब हुन्छ जब पूरा गर्ने परिभाषा जारी हुन्छ 'क्रेप' सम्म तपाईं परियोजना कहिले पनि पूर्ण गर्न सक्नुहुन्न। म 'creep' तिरस्कार गर्दछु। क्रिप बिना नै, कसरी हामी कसरी अब सिद्ध रूपमा निष्पादित गर्न समय छ जस्तो लाग्दैन?
दक्षिण बेन्ड चकलेट कारखानामा, म मेरो कफीको साथ अर्डर गर्छु कुनै foo-foo छैन... मतलब कुनै चकलेटको चम्चा, कुनै व्हिप क्रीम, कुनै चेरी, चकलेटको धूलो वा सिरपको छर्कने… मतलब कफी मात्र हो। कुनै foo-foo ले मलाई मेरो कफी प्राप्त गर्छ, अन्य सामग्रीको पर्खाइ बिना।
नोट: यदि तपाईं पहिले कहिल्यै हुनुहुन्न दक्षिण बेंड चकलेट कारखाना, तपाई महान कर्मचारीहरु संग एक महान ठाउँमा छुटेको छ। तिनीहरूको व्यक्तित्व छ ... दिमाग नभएको ड्रोनहरू होइन। र पहिलो पटक तपाईले राम्रो मोचा पाउनुभयो भने, foo-foo प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहोस्। यो राम्रो उपचार हो।
मेरो बिन्दुमा फर्कनुहोस् ... फर्महरू मनपर्दछ गुगल, फ्लिकर, Sign 37 संकेत र अन्य आधुनिक सफलताहरु 'foo foo' टस। यी मान्छेहरु कुनै foo foo संग महान सफ्टवेयर निर्माण। तिनीहरू अनुप्रयोगहरू बनाउँदछन् जुन काम समाप्त हुन्छ, र उनीहरू पूर्णरूपमा अटल छन् कि यसले त्यो भन्दा बढि गर्दैन। यो काम गर्दछ। यो राम्रोसँग काम गर्दछ। कसैलाई लाग्ला कि यो 'उत्तम' छैन यद्यपि यसमा foo-foo को अभाव छ। ठूलो सफलता र अपनन दरहरूले मलाई भन्छन कि यो बहुमतको लागि सही छैन, यद्यपि। तिनीहरू केवल यो काम गर्न चाहन्छन् - समस्या समाधान गर्नुहोस्! म मेरो काममा नोटिस गर्दछु कि हामी foo-foo मा धेरै समय खर्च गर्दछौं।
तपाईं कुनै foo foo संग क्र्यास भने मलाई आश्चर्य छ।
हुनसक्छ हामीले हाम्रो डेलिभरेबललाई यो तरिकाले संगठित गर्न सुरु गर्नुपर्दछ कि हामी अझ राम्रा र छिटो डेलिभर गर्न सक्दछौं।
फू-फू:हामी यसलाई के भन्न जाँदैछौं? यो कस्तो देखिन्छ? हामीले यसमा राख्न सक्ने सबै विकल्पहरू के हुन्? हाम्रो प्रतिस्पर्धी के गर्दैछन्? हाम्रा ग्राहकहरु के चाहन्छन्? हामीले कहिले यो गर्नु पर्छ?
कुनै foo-foo: यो के गर्दैछ? यो कसरी गर्ने छ? कसरी प्रयोगकर्ताले यो गर्न आशा गर्दछ? हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई के चाहिन्छ? यो गर्न कति समय लाग्छ?
Foo-foo, foo-foo… अझै कफीको विपरित सफ्टवेयरको सम्बन्धमा यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्न प्रयास गर्दै। कफीको साथ यो पर्याप्त सजिलो देखिन्थ्यो, किनकि foo-foo मा सबै बाह्य सामानहरू थिए जुन कफी पर्सा थिएन। तपाईंको फर्महरूको उदाहरणहरूबाट जुन foo-foo लाई बाहिर फ्याँकन्छन्, सबै वेब २.० यस्तो देखिन्छ, उनीहरूको सफ्टवेयर 'सरलता' मा आधारित देखिन्छ, कम से कम उपयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट, दुबै प्रकार्य र सौन्दर्य। मलाई लाग्छ जहाँ म अलिकति भ्रममा परेको छु जहाँ तपाईं foo-foo बनाम सोध्नु हुन्छ। कुनै foo-foo प्रश्नहरू छैनन्, किनकि म निश्चित छैन कि यी प्रश्नहरूको केहि foo-foo उत्पादन गर्दछ कि या त कुनै पनि catagory मा।
हामी यसलाई के भन्न जाँदैछौं? खैर, गुगल, फ्लिकर र sign 37 संकेतहरूले डिजाइन गरेको सफ्टवेयरका लागि नामहरू सबै आकर्षक र महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्, र मलाई लाग्छ केही समय उनीहरूसँग आयो। यो कस्तो देखिन्छ? सरल, सफा, वेब २.० ... फेरि केहि विचार ती कम्पनीहरूको लागी, विकल्पहरू ... अझै foo-foo मलाई लाग्छ। हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू के गरिरहेका छन्, अझै महत्त्वपूर्ण छन्, यदि उल्टो गर्न क्रममा गरियो भने, वा कम्तिमा उनीहरूले गरिरहेको छैन भने। के ग्राहकहरु चाहानुहुन्छ महत्त्वपूर्ण छ ... ग्राहकहरु के लाग्छ उनीहरु चाहिने महत्वपूर्ण छैन। हामीले कहिले यो गर्नुपर्दछ, अझ महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी इन्टरनेट सफ्टवेयर क्षेत्रमा।
यो के गर्दैछ? यो कसरी गर्ने छ? कुनै foo-foo यहाँ मलाई लाग्छ। कसरी प्रयोगकर्ताले यो गर्न आशा गर्दछ? मेरो लागि यो कि त foo वा नन foo हुन सक्छ। हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई के चाहिन्छ? मलाई लाग्छ गैर-फू यहाँ छ। यो काम गर्न कत्ति समय लाग्नेछ। ठिक छ त्यसैले प्रश्नहरूको दोस्रो सेट मलाई लागी एकदम गैर- foo लाग्छ। पहिलो सेट भनेको के हो जसले मलाई अलिक अलमल गर्‍यो।
सायद मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको यो किन आवश्यक छ?
तपाईं मेरो कुराको साथ ट्रयाक मा हुनुहुन्छ। प्रश्नहरू धेरै मिल्दोजुल्दो छ, तर ती सबै तपाईंले सोधेको प्रश्नमा बिग्रन्छन् ... 'किन यसको आवश्यक छ?'
मेरो साथी र साथी छ क्रिस बगगट, "कसले समस्याको समाधान गर्दछ?" भन्ने सोध्ने मन पराउछ। अनुप्रयोगको नाम, रूप, विकल्पहरू, प्रतिस्पर्धा, चाहानुहुन्छ, समय ... ती सबैलाई सफ्टवेयर संसारमा ध्यान दिइन्छ, तर यो कहिले सोधिदैन ... "यसले के समस्या समाधान गर्दछ?"
हामीले गलत प्रश्नहरूको जवाफ दिन यति धेरै समय खर्च गर्नुको सट्टा, सही प्रश्नहरूमा समय खर्च गर्नुपर्दछ!